Sonakshi Sinha – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Holiday: A Soldier is Never Off Duty (2014) Unicode Holiday (2014) သည် IMDb 7.4/10 Filmweb 6.5/10 AlloCiné 3.1/5 Google users 88% ဒါရိုက်တာ A.R. Murugadoss ရိုက်ကူးထား၍ Toby Davies, Mark Haskell Smith တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း ရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Akshay Kumar, Sonakshi Sinha, Freddy Daruwala တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Crime, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. စစ်တပ်အရာရှိတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ရေး ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြု၍ မွန်ဘိုင်းမြို့ကို ဒုက္ခပေးနေသော အကြမ်းဖက် ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းကို ဖြိုခွင်းသွားပုံကို အက်ရှင်သည်းထိတ်ရင်ဖိုများကို ဇာတ်လမ်းတွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ…. Credit Review Zawgyi Holiday (2014) သည္ IMDb 7.4/10 Filmweb 6.5/10 AlloCiné 3.1/5 Google ...
IMDB: 7.2/10 25508 votes
Force2(2016) Unicode ဒီဇာတ်ကားဟာ Force ပြီးလို့နောက်ငါးနှစ်ကြာမှ ထွက်ခဲ့တာဆိုပေမယ့် အောင်မြင်မှု့အနေနဲ့IMDB 6.5/10 နဲ့ RT90% အထိရရှိထား ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အက်ရှင်ခန်းတွေဟာ ဘောလီဝုဒ်ကားဆိုပေမယ့် ဟော်လီးဝုဒ်ကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယတွက် သူလျှိုလုပ်ပေးနေတယ့် RAW အေးဂျင့်တွေကို တစုံတယောက်ရဲ့ သတင်းပေးမှု့ကြောင့် တရုတ်အစိုးရက သိခဲ့ပြီး အေးဂျင့်တွေကို လိုက်လံနှိမ်နင်းပါတော့တယ့် ဒီအေးဂျင့်တွေထဲမှာ ရဲဝန်ထမ်း ရက်ရှ်ဗါဒန် ငယ်သူငယ်ချင်း ဟရေ့ရှ်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။့ ဟရေ့ရှ်က သူ့သူငယ်ချင်းစီကို စာအုပ်တအုပ်ကနေတဆင့် သတင်းပေးကို ဖော်ထုတ်ပြီး အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ရာရှ်ဗါဒန်အနေဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ကိစ္စကို ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်လာရပါတော့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း Mystery / Crime အမျိုးအစားဖြစ်သလို တကားလုံးကို လှည့်ကွက်အပြည့်နဲ့ အချိန်ပေးရတာ တန်တယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ လက်အလွတ်မခံပါနဲ့လို့ပဲ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ Credit Review Zawgyi ဒီဇာတ္ကားဟာ Force ၿပီးလို႔ေနာက္ငါးႏွစ္ၾကာမွ ထြက္ခဲ့တာဆိုေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈ႕အေနနဲ႔IMDB ...
IMDB: 6.2/10 4771 votes